Odayaasha Laascaanood oo diiday la kulanka wafdi ka socda Madaxtooyada Somaliland & Puntland FM oo Heshay …. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA Odayaasha Laascaanood oo diiday la kulanka wafdi ka socda Madaxtooyada Somaliland & Puntland FM oo Heshay ….
Odayaasha Laascaanood oo diiday la kulanka wafdi ka socda Madaxtooyada Somaliland & Puntland FM oo Heshay ….
Wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool ayaa sheegaya in ay diideen Odayaasha dhaqanka ee gobalkaas in ay la kulmaan wafdi ka socda Madaxtooyada Somaliland oo magaaladaas kusugnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo qorshahoodu yahay sidii ay aduunyo ugu kala furfuri lahaayeen duqowda dhaqanka ee magaalada.
Odayaasha qaarkood oo la hadlay Puntland FM, kana gaabsaday magacooda ayaa sheegay in ficilada hadda socdaa ay dhabaha u xaari doonaan dagaal aan la mahdin doonin oo dhexmara Shacabka iyo maleeshiyaadka maamulkaas.